Education Archive - Jerung Films
राज कुमार राई ९ भदौ –कामठाण्डौं । उज्याले अभियन्ता कुल मान घिसिङलाई विद्युत प्राविधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा फेरि बहाली गर्न प्रचण्ड सहमत भएपनि ओली र बर्षमान पुनले अनेक आनाकानी गरि रहेका छन् । सम्पूर्ण देशबासी जनता कुलमान घिसिङको पक्षमा छन् । प्रचण्डले पनि कुलमानलाई नै फेरि नियुक्ति दिने जोड गरि रहेका बेला यी ६ वटा कारण देखाएर प्रधान्त्री ओली घिसिङलाई स्थान दिने पक्षमा छैन । राज्यको लगानीमा व्यक्तिगत जस: प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि त्यसबाट भए गरेका...
महावीर पुनले निशुल्क पिपिइ बितरण गर्ने:
२४ चैत्र २०७६, सोमबार | राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले काठमान्डू भ्याली भित्रका एम्बुलेन्स ड्राइभरहरुलाई PPE निशुल्क बितरण गर्न थालेका छन। एम्बुलेन्स ड्राइभरहरु सङ्ग PPE नभएको हुनाले अति आबश्यक एम्बुलेन्स चलाउन नमानेको समाचार सुनेपछी चालकहरूको सुरक्षा सहित बिरामिको सहजताको लागी पिपिइ बितरण गर्न थालिएको हो। पिपिइ लिन काठमान्डूमा हुनु भएका एम्बुलेन्स ड्राइभरहरुले लाईसेन्स सहित एम्बुलेन्स नै लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरमा आज २ बजे पछी पुग्नु पर्ने छ। सार्वजनिक संजालमा महाविर पुनले लेखेका छ्न।PPE को पैसा तिर्नु पर्दैन. मेरो...
पर्सा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उपचारमा हेलचक्रयाई गरेर इमर्जेन्सीका बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखालाई पत्र लेख्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको बुझिएको छ। गत शनिवार (चैत १५) मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका कलैया उपमहानगरपालिका–२२ भोडाहा धोंधा गाउँका २५ बर्षीय विजय कुसवाहाको उपचारमा मेडिकल कलेजले हेलचक्रयाईं गरेकाले काठमाडौं लैजादै गर्दा चैत १७ मृत्यु भएको थियो । घरायसी काम गर्नेक्रममा थ्रेसरमा परी दुबै खुट्टा र हातमा घाउ...
सांसद मिन बहादुर विश्वकर्म : सूचिउन्मुख आदिवासी जनजातिका समुदायहरु राज्यले तत्काल सुचिकृत गर्नुपर्छ र सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
२४ साउन, धरान । २५ औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ, धरान नगरसमितिले शंकरदास मेवाहाङको अध्यक्षतामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिकारुपमा उपस्थित प्रतिनिधिसभा सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मले संविधानको धारा–४२ मा उल्लेख गरिएको सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न सूचिउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाई तत्काल राज्यले सूचिकृत गर्नुपर्ने बताएका छन् । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन किराती विधिबाट सेउलाबाट पवित्र जल तीनपटक छर्केर, चिम्फिङको धुप धुवाँर गरी प्रमुख अतिथिबाट गरिएको थियो । किराती उद्घाटन विधिको व्याख्या नेपाल किरात कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान संघका...
वातावरण मन्त्रालयले किन गरायो चन्द्रागिरि हिल्सलाई २० लाख जरिवाना
काठमाडाैं – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएकामा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त कम्पनीले पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउने भएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चन्द्रागिरिलाई वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को धारा १८ को (१) मा ईआईए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक...
प्रचण्डकै राजनीतिक प्रतिवेदनमा लाइन पास
काठमाडौं २०७६ असार २२ आइतबार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदिशा विवाद किनारा लागेको छ । नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ नै किनारा लागेको हो । यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीबीच राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने कि जनताको बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा विवाद थियो । आज (आइतबार) बिहान बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा यसअघि नै सहमति भइसकेको दस्तावेज (प्रतिवेदन) नै प्रकाशनमा लैजाने समझदारी भएको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिएका हुन् । आइतबार खरीपाटीमा नेपाल दूरसञ्चार...
केही महिनाअघि पोर्न साइटमा समेत पुगेको मोडल भनिने परि तामाङको भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियो लिकेज भएर साइटमा समेत आएपछि तामाङ रोईकराई गर्दै माफी मागेको अर्को भिडियो आएको थियो । तर, हाल भने उनले उक्त भिडियो आफैंले खिचेको र मोवाइल बनाउने ठाउँबाट लिक भएको बताएकी छन् । तामाङले आफ्नो युट्युव च्यानल पनि खोलेकी छन् । हालै मात्र विभिन्न मिडियाका नाममा खुलेका युट्युव च्यानलमा अन्तरवार्ता दिन पुगेकी परिले उत्तेजक र पचाउन नसकिने भासाको प्रयोग गर्दै यौन कर्ममा आफ्नो दररेट...
टीबीएम मेसिन : सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको सुरूङ खन्न |
काठमाडौं। नेपालमा नै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन(टिबिएम)को प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदा एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । सो आयोजनाको सफलतापछि सरकारले अर्को नदी स्थानान्तरण परियोजनाको रुपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने सोच राखेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफलतासँगै सरकारले नदी स्थानान्तरण परियोजनालाई एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढाउने सोचका साथ...
जन्मदेखि खरानीसम्म : मानवयात्राः आखीर किन काटामार ! ?
कुनै मान्छेको उमेर ४० वर्षको छ । ऊसँग घरजग्गा छ, परिवारमा श्रीमती, छोराछोरी र आमाबाबु पनि छन् । व्यापार छ वा जागिर, आम्दानीको स्रोत गतिलै छ । छोराछोरी पढेकै छन्, लाउन–खानको पनि कुनै सुर्ता छैन । समाजमा महसुस गरिने सामाजिक हैसियत पनि कमजोर छैन । तैपनि, ४० वर्षे व्यक्तिको मन शान्त छैन । सुख र आनन्दको महसुस जीवनमा कहिल्यै गर्न पाएको छैन । ४० वर्षे व्यक्तिको मात्रै होइन, ५० वर्षे वा ६० वर्षे वा त्योभन्दा बढी वा घटीको पनि...